Maxaad ka taqaan magaalada maalintii Dowladdu maamusho Habeenkiina Al-Shabaab ka taliyo [Warbixin].
Sunday December 19, 2021 - 13:35:38
13,December 2021 ayay aheyd markii ay dagaalyahannada Al Shabaab si nabad gelya ah kula wareegeen gacan ku haynta degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan bartamaha dalka Soomaaliya.
La wareegista Matabaan ayaa sabab u noqotay in qoob gariir uu usoo galo mas'uuliyiinta maamulka Galmudug ee ku sugan deegaanka Guriceel ee gobolka Galguduud.
Inkastoo Matabaan laga maamulo gobolka Hiiraan hadane inta badan dadka ku dhaqan waxay kasoo jeedaan gobolka Galguduud waana magaalo haysashadeedu ay saameynayso Guriceel iyo Dhuusamareeb.
Ka hor intii aysan Al Shabaab qabsan magaalada waxay soo xasiliyeen dhammaan tuulooyinka iyo deegaannada hoos yimaad arrinkaas oo sabab ka dhigay in Matabaan ay u noqoto hadaf sahlan oo ay ka sameyn karaan howlgallo melleteri iyo kuwa amni intaba.
Ciidamada wilaayada Islaamiga Hiiraan ayaa gacanta ku haya deegaanno lafdhabar u ah ciiddii maamuli laheyd Matabaan waxaana deegaanadaas kamid ah Bacda,Beergidiid iyo Coomaad.
Tan iyo wixii ka dambeeyay isbuucii lasoo dhaafayay markii ay jihaadiyiintu isku fidiyeen deegaannada kulaala wadada laamiga ah ee Hiiraan ayay Matabaan aheyd meel maalintii ku jirta maamulka ciidamada maamulka 'Galmudug' , marka uu gabalku dhaco waxaa Matabaan maamula Al Shabaab.
ilo wareedyo ayaa noo sheegay in marka lagaaro 4:00 galbnimo ay ciidamada dowladda ay magaalada isaga baxaan ayna aadaan dhanka Guriceel halka Al Shabaab ay soo galaan Maqribkii ayna ku sugnaadaan illaa 7:00 subaxnimo.
Arrinkan wuxuu daciifiyay awooddii maamulka dowladda ee degmada waxayna dadku u arkaan maamullada 'Hirshabelle' iyo 'Galmudug' kuwa magac uyeel ah oo aan hanan karin maamulidda magaaladan oo muhiim u ah gobollada dhexe.
Xoogaga jihaadiga ah ayaa marmarka qaar fagaarayaal kula hadla bulshada waxayna ka wacyi geliyeen la shaqeynta maamullada dabadhilifyada u ah ciidamada shisheeye iyo adeegsiga waxyaabaha maanka dooriya oo ay ku fitnaysanyihiin dhalinyarada ku dhaqan gobollada dhexe.
Jimcihii lasoo dhaafay munaasabad ballaaran oo soo dhoweyn ah ayaa jihaadiyiinta loogu sameeyay duleedka Matabaan, munaasabadda waxaa soo xaadiray qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee caanka ka ah Matabaan iyo culimaa'udiin dhammaantoodna waxay bogaadinayeen isbedelka deegaanadooda ka hana qaaday.
Reer Matabaan oo ku dhib qabay colaaddii qaab beeleedka ku salaysneed ee ay kicin jireen maleeshiyaadka Dowladda ayaa naawilaya in ay kasoo kabsan doonaan qulqulatooyinkii u dhaxeeyay dadka walaalaha ah ayna hoos harsan doonaan ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee bulshada Matabaan ku riixay in ay u yeertaan jihaadiyiinta ayaa ah amni xumada iyo dilalka macna darrada ah ee deegaanadooda ka dhacayay tobankii sano ee lasoo dhaafay.
Wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka dhisan maxaakim Islaami ah kuwaas oo ay ucadaalad doontaan Malaayiin qof, maxaakimtaas waxay ku guuleysteen in ay xal caadil ah ka gaaraan kiisas xal loo weeyay 30kii sano ee uu dalku burbursanaa.
Tobankii sano ee lasoo dhaafay ciidamada Xabashida Itoobiya ayaa saldhigyo ku lahaa dhammaan degmooyinka ku teedsan wadada laamiga ah iyagoo isku dayi jiray in awoodda jihaadiga ah ay u diidaan ugudbidda dhanka xuduud beenaadka Soomaaligalbeed.
Heysashada Jihaadiyiinta ee Matabaan waxay ka dhigantahay in awoodda islaamiga ah ay albaabada ugaraacayso magaalooyin muhiim ah oo ku teedsan wadada laamiga ah ee gobollada dhexe.
Bulshada Soomaaliyeed oo ku daashay maamullada dabadhilifyada ah ee taabacsan Xabashida Itoobiya ayaa hadda garatay halka uu xalku ku jiro.
WQ Warfaa Kheyrdoon
Soo duulayaasha AMISOM oo Shaar cusub loo gelinayo si ay usii gumeystaan Soomaalida [Warbixin].
Dhimashada ka dhalatay Covid19 ee dalka Mareykanka oo hal malyan ku dhow [Warbixin].